Mahad Salaad oo sir ka qoray shirka la filaayo in uu ka furmo London - Caasimada Online
Home Warar Mahad Salaad oo sir ka qoray shirka la filaayo in uu ka...
Mahad Salaad oo sir ka qoray shirka la filaayo in uu ka furmo London
Muqdisho (Caasimada Online) – Shirka London ee loo balansanyahay horaanta bisha May waxaa lagu soo go’aamin doonaa in Soomaaliya aysan yeelan Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya (Military). Iyada oo Madaxda Qaranka iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyadu isku raaceen shirkii Madasha ee Mogadishu lagu qabtay 15 – 16 April 2017 inla baabi’iyo Ciidanka Militariga ee hada jira. Lana dhiso 18,000 askari oo ka imaan doona kuna ekaan doona xuduudaha isla maamulada ay ka imaanayaan. Kuwaas oo loo qaybsanayo sida soo socota:
1. Puntland 3,000
2. Galmudug 3,000
3. Hirshabelle 3,000
4. Banaadir 3,000
5. Koonfur Galbeed 3,000
6. Jubaland 3,000
Taasi micnaheedu waxay tahay inaysan jiri doonin mustaqbalka dhaw iyo midka fogba Ciidan Soomaaliyeed oo Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed difaaca. Midaas badalkeedana Soomaaliya loo sameynayo Ciidamo Booliis ah oo Dowlada Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada canshuuraha gudaha u qaada, saldhigyada u ilaaliya, tuugada guryaha usoo dhacdana soo xira.
Waxa loo socdana waxa ay tahay “Soomaaliyada Cusub oo ka koobnaan doonta maamulo leh xuduudo gudaha ah oo kala qo’qoban, aanan lahayn Ciidamo difaaca Xuduudaha Dalka, Midnimada iyo Madaxbanaanida Soomaaliya”.
Taasoo ka dhigan inla rabo in Soomaaliya lagu rido dabinkii ay diiday 1960 kii markii ay xornimada qaadatay. Waxaan dhihi karaa hadii sidaan wax u dhacaan waa nasiib daro Dalka iyo Dadka Soomaaliyeed usoo hoyatay.!
Dagaalkii Ahmed Gurey, Darwiish ka iyo Leegadii, Baarliin dabinkii la dhigay, intaa waa ina daba socdaanee dantey naga leeyihiin iyo waxaan dooni kala fogaa.
Waxaa qoray: Xildhibaan Mahad Salaad
Somali army kills 30 terrorists in southern region
Caasimada Online - June 19, 2021
The Somali National Army (SNA), backed by regional forces, on Thursday killed 30 Shabab terrorists and injured 24 others in an operation in the...